काँग्रेस सहमहामन्त्रीको मतगणना अपडेट, कसले कति मत ल्याए ? - ramechhapkhabar.com
काँग्रेस सहमहामन्त्रीको मतगणना अपडेट, कसले कति मत ल्याए ?
नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनअन्तर्गत पार्टी कार्यालय सानेपामा अहिले सहमहामन्त्रीको मतगणना भइरहेको छ । सहमहामन्त्रीको मतगणनामा देउवा पक्ष्ँका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । दलित तर्फको १७८० मतगणनामा मानबहादुर विश्वकर्माले अग्रता लिएका छन् । उनले ८३९ मत पाउँदा कोइराला पक्षका जीवन परियारले ८३१ र गंगा सुनारले ७० मत पाएका छन् ।
महिला तर्फको १५०४ मतगणनामा देउवा पक्षकै डिना उपाध्यायले ८०३ मतका साथ अग्रता लिएकी छिन् । कोइराला पक्षकी उम्मेदवार कमला पन्तले भने ६८३ मत मात्रै पाएकी छिन् ।
त्यसैगरी आदिवासी तर्फको ८९९ मतगणनामा देउवा पक्षका भीष्म आङ्दम्बेले ५१८ मतका साथ अग्रता लिएका छन् । कोइराला पक्षका विकास लामाले ३५७ मत पाएका छन् ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले बिजुली नदिने गतिविधि गरेको खबर पाए तत्काल कारबाही गर्छाैँ : घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको सर्भिस डेलिभरीको विषयमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ । आज बिहीवार ऊर्जा मन्त्रालयमा उद्योगी व्यवसायीसँग बिजुली आपूर्तिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे ।
उहाँले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरूबाट प्राधिकरणको विद्युत् सर्भिस कमजोर भएको गुनासो आएको बताउनुभयो । निर्देशक घिसिङले सर्भिस डेलिभरीका विषयमा प्राधिरकणलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले प्राधिकरणका कुनै कर्मचारीले कुनै उद्योगमा बिजुली कटौती गर्ने, बिजुली नदिने गतिविधि गरेको खबर पाए तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो । घिसिङले नेपालमा बिजुलीकाे महसुल बिस्तारै सस्तो बन्दै जाने बताउनुभयो । उहाँले बिजुली महसुल सस्तो बनाउने कुरामा विद्युत् उत्पादकबाट महसुल बढाउन दबाब आउने र उद्योगीबाट घटाउने दबाब आउने गरेको बताउनुभयो ।
निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणले उद्योगलाई दिने विद्युत् सर्भिस कमजोर भए निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ । यदि प्राधिकरणका कुनै कर्मचारीले केही गरेको छ भने निजी क्षेत्रले प्राधिकरणका कर्मचारीसँग मिलेर भित्रभित्रै खुसखुस गरी मिल्न भएन । कर्मचारीसँग नमिलेर प्राधिकरणलाई सम्पर्क गरिदिनुपर्छ । प्राधिकरणले त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्छ । उद्योगीले प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्दा काम बिग्रन्छ कि भन्ने होइन ।’